Fomba 3 Niova ny resadresaka varotra nandritra ny taona | Martech Zone
Ny resaka varotra nentin-drazana dia miova mandrakizay. Tsy afaka miantehitra amin'ny teboka firesahana mahazatra sy maodely hita intsony ny mpivarotra hivezivezy amin'ny tsingerin'ny varotra. Izany dia mamela mpivarotra marobe manana safidy hafa fa hamerina sy hamantatra ny zava-misy vaovao mahomby amin'ny resaka varotra mahomby.
Saingy, alohan'ny handehanantsika Ery, ahoana no nahazoantsika Eto?
Andao hodinihintsika ireo fomba 3 nanovan'ny resadresaka varotra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Amin'ny alàlan'ny fizahana ny fomba fanaon'ireo mpivarotra ny fifampiresahana tamin'ny mpividy mety ho azontsika, azontsika atao ny mahatakatra hoe mankaiza ny resaka fivarotana ary inona ny paikady vaovao mivoatra mba hanakatonana ny fifampiraharahana amin'ny vanim-potoana maoderina.
Kolontsaina iray miova
Rehefa mivoatra ny fiarahamonina dia miova ny olona, ​​midika izany fa ny olona amidy mba hiova koa. Rehefa mandeha ny fotoana dia miharihary ny fanovana ny fisainany, ny zavatra ilainy ary ny fihetsiny. Amin'izao andro izao, ny olona amidy dia mianatra bebe kokoa amin'ny fotoana ifandraisany amin'ny mpivarotra. Ny famaritana ny vokatra, ny fampitahana ny vidiny, ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa sns ... dia mora azo amin'ny Internet alohan'ny hidiran'ny mpivarotra sary mihitsy aza. Manova ny andraikitry ny mpivarotra amin'ny fizotry ny fividianana izany. Niala tamin'ny vaovao izy ireo Hifampiresaka, ho an'ny consultant ary mpamorona sanda.
Ny fivarotana amin'ny fivarotana consultative
Tsy mandeha intsony ny varotra nentin-drazana. Ny mpivarotra dia mila mitady fomba hanaovana resadresaka ifanaovana roa miaraka amin'ny vinanin'izy ireo. Ireo mpividy mety tsy manam-potoana ho an'ireo mpivarotra izay mbola tsy nanao fikarohana momba ny orinasany ary aleony misoroka indrindra ny resaka “mampihetsi-po” lava. Tian'izy ireo hifaneraserana amin'ireo mpivarotra izay efa mahatakatra ny fanamby tsy manam-paharoa sy ny fotoana manokana ananany rehefa mitondra fahitana vaovao, mamaha olana ary mamorona lanja. Ankoatr'izay, ny "fitoviana", na dia manana kalitao tsara hananan'ny mpivarotra aza izy dia tsy manome antoka ny fahombiazana intsony. Ny fahatokisana ny mpivarotra iray dia tsy tonga aorian'ny fahafantaran'ny mpanjifa ny sandany.
Resadresaka fivarotana marobe
Ny fivarotana mivantana dia tsy ny fomba fifandraisana lehibe amin'ireo mety ho mpividy. Ny fandefasana hafatra, ny fampiasana media sosialy, ny fandefasana mailaka ary ny fampiantranoana hetsika manokana dia anisan'ny fomba nilaina mba hampitana ny hafatrao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mpivarotra ankehitriny dia tokony ho be mpampiasa, amin'ny lafiny iray. Ny tsirairay amin'ireo fantsona ireo dia mety mitaona ny mpividy ary, vokatr'izany, ny mpivarotra dia tsy maintsy mivelatra ary mianatra miasa am-pahombiazana ao anatiny.
Tsy miafina izany. Ny resaka varotra nentim-paharazana dia tsy nahatratra ny vokatra vitany taloha intsony. Ny làlam-pifanakalozan-dresaka taloha dia soloina fitsipiky ny firotsahana an-tsehatra mahery vaika kokoa.
Amin'ny alàlan'ny fahazoana vaovao sy loharano tsy manam-paharoa dia tsy mila mpivarotra intsony ny mpividy. Mila varotra ry zareo mpanolo-tsaina.
Ity karazana mpivarotra matihanina vaovao ity dia mila mamolavola ny resadresak'ireo mpividy amin'ny alàlan'ny fanehoana fahitana tena izy ary ho mpamaha olana izay manolotra vahaolana mety hitranga amin'ny teboka fanaintainan'ny orinasa (na dia tsy misy ifandraisany amin'ny orinasa na vokatra amidiny aza ireo vahaolana ireo) . Ireo mpivarotra maoderina dia manampy ny mpividy mety handray fanapahan-kevitra tsara kokoa amin'ny fametrahana azy ireo ho ivon'ny resaka. Amin'ny fiomanana amin'ny resaka varotra maoderina dia miomana ny hiroborobo amin'ny fivarotana zava-misy vaovao sy mivaingana izy ireo.
Tags: fivarotana consultativevarotra maroberesaka varotrafivarotana fivarotanaFanamafisana ny varotrafomba fivarotana